लोक तथा दाेहाेरी गीतमा किन हुन्छ ‘थेगो’ प्रयोग ? - Naya Patrika
लोक तथा दाेहाेरी गीतमा किन हुन्छ ‘थेगो’ प्रयोग ?
कृष्ण कट्टेल काठमाडौं | पुष ०८, २०७४
लोकदोहोरी गीतमा प्रयोग हुने शब्द हो ‘हे’ र ‘निरमाया’ । गीतको उठानको क्रम र मध्यभागमा प्रयोग हुने यी शब्दलाई गीतमा कहिले र कसले प्रयोगमा ल्यायो भन्नेबारे कुनै आधिकारिकता छैन । यी शब्द नेपाली मौलिकता र पुरानो जनजीवन तथा लोकगीत संस्कृतिसँग जोडिएर आएको बताउँछन् लोक तथा दोहोरी क्षेत्रका कलाकार ।
वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको भनाइलाई सापटी लिने हो भने ००३ अघिसम्म लोकगीतलाई ग्रामीण गीत भनिन्थ्यो । त्यसवेला गीत रेकर्ड गर्ने प्रचलन त परै जाओस्, लेख्ने र छाप्ने चलनसमेत थिएन ।
यसरी प्रविधिको विकाससँगै गीतसंगीत रेकर्ड हुने र व्यावसायिक रूपमा बिक्री हुनेक्रम बिस्तारै विकास भयो । उनै वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले ‘हाम्रो लोकसंस्कृति’ नामक कृति ०१३ सालमा प्रकाशित गरेसँगै लोकसंस्कृति र लोकगीत भनेर प्रयोगमा आउन थाल्यो ।
जोशी भन्छन्, ‘गाउँघरका महिलाहरू घाँसदाउरा गर्न जाँदा जंगलमा निकै विरहका लोकभाका गुन्गुनाउँथे । त्यसवेला लोकगीत, लोकसंस्कृति भन्ने चलन नै थिएन । उनीहरूले आफ्नो छोरा, श्रीमान् वा दाजुभाइ युद्ध लड्न गएको सम्झनामा मन छुने गीत गाउँथे ।’
“‘गाई पाल्यो रेलिमाई वनको बाघलाई
छोरो पाल्यो रेलिमाई जर्मनको धावालाई”
लोक तथा दोहोरी गीतमा ‘हे’ र ‘निरमाया’सँगै प्रयोग हुने थेगोहरू हुन् : ‘रेलिमाई’, ‘माया’, ‘सानुमाया’ आदि–आदि । लोकगीतमा यस्ता थेगो प्रयोग हुनु र यसको महत्वबारे कलाकारहरू यसो भन्छन्
यस्ता शब्दले लोकदोहोरी गीत बचाउन मद्द गर्छ
पशुपति शर्मा, लोक तथा दोहोरी गायक
हामीले जे–जे सिक्दै आयौँ, त्यस्तै मौलिक शब्दहरू नै गीतमा प्रयोग गर्दै आयौँ । गीतमा यस्ता थेगोको सुरुवात कसले गर्यो भन्ने आधिकारिकता त छ जस्तो लाग्दैन । तैपनि यस्ता शब्दले लोक तथा दोहोरी गीत बचाउन मद्दत गर्छ नै ।
पछिल्लो समय ‘हे’ र ‘निरमाया’ शब्द मात्रै प्रयोग भएका छैनन् । अन्य नयाँ थेगो पनि जन्मिएका छन् । जस्तो ‘मलाई अमेरिका यही’ भन्ने गीतमा मैले ‘आ होई’ थेगो राखेँ । समयक्रमसँगै नयाँ थेगोहरू पनि आउँछन् । तर हे, बरै, निरमायाजस्ता थेगो पनि प्रयोग हुँदै जान्छन् ।
तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा अहिले प्रयोग घटेको छ
नारायण रायमाझी, गीतकार तथा लोकगायक
पक्कै पनि लोक तथा दोहोरी गीतमा हे, बरै, निरमाया, सानुमायाजस्ता थेगो बढी प्रयोग हुन्छन् । यिनीहरू थेगो हुन् । यी शब्दले लोकगीतमा मिठास थपिदिन्छ । कतिपय गीतलाई त यिनै शब्दले पूर्णता दिन्छ ।
किनकि कतिपय गीतको बोल नै यस्तै थेगोबाट सुरु गरिएको हुन्छ ।
यस्ता थेगो गीतमा सुरुवातदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको मान्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली ग्रामीण परिवेश, लोकसंस्कृति, संस्कारमा बढी घुलमिल भएकाले मात्रै गीत लेखेका छैनन् ।लोकसंस्कार अर्थात् ग्रामीण परिवेशमा नहुर्किए पनि गीत सिर्जना गर्ने सर्जकहरू बढेका छन् । तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा अहिले गीतमा यस्तो थेगोको प्रयोग घटेको मान्न सकिन्छ ।
सेन्टिमेन्टल र मायाप्रेमसम्बन्धी
गीतमा यस्ता शब्दको प्रयोग बढी हुन्छ
लोक तथा दोहोरी गायिका
यस्ता थेगो गीतमा हामीले भन्दा बढी ‘सिनियर’ कलाकारले नै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । यस्ता थेगो लोक तथा दोहोरी गीतमा युगौँयुग प्रयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
‘टिपिकल’ गीतमा यस्ता शब्द प्रयोग हुने गर्छ । मलाई त यस्ता शब्द लोकगीतको विशेषता हो जस्तो लाग्छ ।
यी यस्ता थेगोले नै लोकगीतमा मिठास थपेको हुन्छ । अझ सेन्टिमेन्टल गीत र मायाप्रेमसम्बन्धी गीतमा यस्ता शब्दको बढी नै प्रयोग हुन्छ ।
‘युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउँछौं’
११ वर्षकै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेकी बिना